Inobungane, idizayini yangaphakathi yama-60s, i-B&B ephezu kwentaba - I-Airbnb
Inobungane, idizayini yangaphakathi yama-60s, i-B&B ephezu kwentaba
Monte San Pietro, Emilia-Romagna, i-Italy
Ibekwe phezu kwegquma emaphandleni ase-Bologna, i-Cherry Cat B&B iyindawo ekahle uma ufuna indawo enokuthula, enokubukwa okumangalisayo, izindawo zokudlela ezinhle kakhulu (nabenzi bewayini) ezindaweni eziseduze. Lolu hlu olwegumbi eli-1 elikabili. Siyakwamukela! ( ps sicela uqaphele: udinga imoto ukuze usifinyelele)
I-B&B inamagumbi amane akhanyayo aphindwe kabili wonke anegumbi lokugezela le-en-suite, isimo somoya, i-tv yesikrini esiyisicaba kanye nokubuka amagquma azungezile namaphandle. Igumbi ngalinye linombhede okabili (usayizi ungamasentimitha angu-160x200) nomatilasi wegwebu wekhwalithi ephezulu. Amakamelo amabili avulekile ethafeni elibheke esigodini. Izindawo ezihlanganyelwe zifaka ihholo elikhulu/igumbi lokuphumula, igceke elivulekile elingadini, ikhishi kanye nengadi.
Njengoba iyi-B&B, ukudla kwasekuseni kufakwe esilinganisweni segumbi. Sijabule kakhulu ukwamukela izivakashi zemifino/imifino ngakho-ke sicela usitshele kusenesikhathi uma unanoma yiluphi uhlobo lwemfuneko yokudla, sizokujabulela ukukunikeza isidlo sasekuseni esifanelana nezidingo zakho.
Ikhishi lethu litholakalela izivakashi ezidinga ukulisebenzisela ukuzilungiselela ukudla, kodwa nokho kuyiqiniso ukuthi le ndawo igcwele izindawo zokudlela ezinhle kakhulu zendabuko (sijabule kakhulu ukunikeza izincomo ngakho), ama-trattorias wendawo angenye ye isizathu esithandeka kakhulu sokuhlala endaweni yethu!
Ukuhamba ngemizuzu eyi-15 ukusuka kumgwaqo omkhulu we-Bologna ophumayo e-Casalecchio futhi usuka enkabeni yedolobha lase-Bologna. Sitholakala emaphandleni anokuthula emagqumeni athambile angaphezu komsindo nokushisa kwedolobha. Ungakwazi ukufinyelela i-Modena ngesigamu sehora; I-Ferrara, i-Ravenna, i-Florence yi-daytrip ongase uyicabangele ukusebenzisa indawo yethu njengesisekelo; I-Venice cishe ihora elingu-1 nesigamu ukusuka e-Bologna (kokubili ngemoto noma ngesitimela).
Siphakathi nendawo yasemaphandleni enamagquma. Uma udinga ibhange, isitolo esikhulu, i-gelateria, ibha, kufanele uye edolobhaneni eliseduze, amakhilomitha angu-4 ukusuka endaweni yethu.
Izinhlobonhlobo zezindawo zokudlela ezinhle zikumizuzu embalwa ukushayela (phakathi kwemizuzu emi-2 nemizuzu eyi-15)
Ngokuyisisekelo udinga imoto (imoto) ukuze isifinyelele, izithuthi zomphakathi zingekho kude (amabhasi nezitimela zasemadolobheni zisendaweni engamakhilomitha angu-4 noma angu-8 ukusuka endlini kanti ngeSonto inkonzo ibuthaka kakhulu). Lokhu kusho, singakwazi ukunikeza isevisi yamahhala yokulanda esiteshini sesitimela noma esikhumulweni sezindiza. Uma ungathanda ukusebenzisa le sevisi, sicela usithinte kusengaphambili ukuze uqinisekise ukuthi siyatholakala ngezinsuku ohlele ukuba lapha.
Siyabonga ngokubheka nokwamukela ku-Cherry Cat B&B!!!
I-B&B inamagumbi amane akhanyayo aphindwe kabili wonke anegumbi lokugez…
4.98 (izibuyekezo ezingu-58)
We are a family of 3 that live right next door , so we are always available to answer questions or help planning your stay. We've lived in and traveled to many different countries and understand the importance of a nice place to stay while you are on the road away from home. We hope to be able to provide hosting to other travelers and to help them with a wonderful experience.
We are a family of 3 that live right next door , so we are always available to answer questions or help planning your stay. We've lived in and traveled to many different countries…
Hlola ezinye izinketho ezise- Monte San Pietro namaphethelo